कृषि बैंकको कर्मचारीको पासवर्ड प्रयोग गरेर ५ करोड लुट -
अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता असोज ८ गते।
चोरीको सुरुवात भने पानस रेमिटबाट भएको थियो । नयाँ बानेश्वरको पानस रेमिटका कर्मचारीले आइतबार रेमिट्यान्स प्रणालीमा अनौठो प्रकृतिको घटना सामना गर्नुपर्‍यो । रेमिटकी कर्मचारी सुमिना धितालको नामबाट आएको ६०/६० हजार रुपैयाँ एकैदिन ६ जनाले निकालेका थिए ।उनीहरुमध्ये लीला तामाङ र लेबिस घलेले सुमिना काम गर्ने बानेश्वर शाखाबाटै पैसा निकालेका छन् । प्रहरीकाअनुसार सातौं व्यक्ति पनि धितालकै नामबाट आएको ६० हजार निकाल्न आएपछि भने पानस रेमिटका कर्मचारीलाई शंका लाग्यो । सिस्टममा चेक गर्दा २० जनालाई धितालको आईडीबाट एकैदिन एउटै परिणामको रकम ट्रान्सफर भएको भेटियो ।
यसबारे सुमिनालाई भने कुनै जानकारी थिएन । ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई थाहै नभई भएको अस्वभाविक रकम ट्रान्सफरबारे हामीलाई खबर आएको थियो’, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले रकम पठाउने र झिक्नेको सूची मगाएर अनुसन्धान थालेका थियौं ।’
रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न मध्ये काभ्रेस्थली, काठमाडौंका सञ्जय घले, उनकी माइजु लक्ष्मी लामा तामाङ, बहिनी निर्मला तामाङ र उनका छोरा निमा तामाङ पक्राउ परे । रकम निकालेकै दिन साँझ पक्राउ परेका सञ्जयले खुलाए, ‘चिनजानकै लवाङ तामाङले भनेपछि रकम निकाल्न गएका थियौं ।’
लवाङसँग लक्ष्मीको आर्थिक कारोबार पनि थियो । त्यसैले रेमिट्यान्सबाट निकाल्ने रकम कुन प्रयोजन र कसरी आएको थियो भन्नेबारे उनीहरुले सोधेनन् ।लगत्तै, लवाङलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान टोलीले रेमिटबाट निकालिएको रकमबारे सोधीखोजी थाल्यो ।
उनले हड्बड्मा आफूसँग ३१ लाख भएको फुस्काए । प्रहरीले चार जनाले निकालेको २ लाख ४० हजारबारे सोधीखोजी गरिरहेको थियो, ३१ लाख भनेपछि थप शंका उत्पन्न भयो । सोधपुछका क्रममा लवाङले सर्लाहीका पुष्पराज खड्काको नाम लिए, जसको साथबाट पनि ३१ लाख नै बरामद भयो । दुवै जना जडिबुटी व्यापारी हुन् ।
उनीहरुलाई पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्ने क्रममा नै पानस रेमिट मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकबाट पनि अनधिकृत रुपमा रकम चोरी भएको खुल्यो ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लवाङको बैंक खातामा भएको रकम पनि परीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा उनको खातामा ५० लाख देखिएको एक अधिकृत बताउँछन् ।
त्यसपछि प्रहरी टोली बैंकबाट पनि रकम चोरिएको निष्कर्षसहित कृषि विकास पुग्यो । सुरुमा त बैंकले प्रहरीलाई पत्याएन । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी निरीक्षकले भने, ‘जब लाहान शाखाबाट १२ जनाको खातामा पैसा गएको भेटियो, उहाँहरुको सातो गयो ।’ नजाओस् पनि किन ? लाहान शाखामा भएको ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ११ जना व्यक्तिको खातामा गएको थियो ।
जसमध्ये १५ लाख रुपैयाँ कैलाश विकास बैंक, पालुङ शाखामा गएको भेटियो भने त्रिसुली, भजनी र बालाजुमा यही प्रायोजनका लागि खाता खोलेको समेत देखियो ।
प्रहरीको अपराध महाशाखाले दुबै बैंकको सहयोग लियो र रकम पठाइएको बाँकी खाता रोक्का गर्‍यो । खातावाला ठिमीकी सुनिता श्रेष्ठ, तनहुँका श्रवणकुमार श्रेष्ठ, कैलालीका विजय शाह र चन्द्रबहादुर बुढा पनि पक्राउ परे ।
न्यूरोड शाखामा रकम लिन गएका वेला श्रवणकुमार श्रेष्ठ पनि सुनिताको साथमै थिए । उनी पनि नियन्त्रणमा छन् । विजय र चन्द्रले कृषि विकास बैंकको कैलाली शाखामा खाता खोलेका थिए, जसमा अज्ञात व्यक्तिले रकम हालेको भेटिएको छ ।
लवाङमार्फत रेमिटमा कसरी पैसा आयो ? सिराहा शाखाबाट कसरी १२ जनाको खातामा पैसा गयो ? प्रहरीको अनुसन्धान टोली यसको जवाफ खोजीमा जुटेको थियो । यतिञ्जेल कृषि विकास बैंकको विभिन्न शाखाबाट एक महिनादेखि रकम निकालिएको भेटियो ।
यसपालीको दशैंमा मागभन्दा एक हजार बढी खसीबोका आपूर्ति हुने